Top 5 Serum Skinceuticals hiệu quả tốt được tin dùng nhất | Muasalebang - Muasalebang
Top 5 Serum Skinceuticals hiệu quả tốt được tin dùng nhất | Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 Serum Skinceuticals hiệu quả tốt được tin dùng nhất | Muasalebang in Muasalebang
Kuyabonakala ukuthi ama-serum e-SkinCeuticals aziwa ngamakholwa amaningi obuhle. Ngenxa yemiphumela emikhulu nephumelelayo esikhumbeni ngokucacile esiletha. Lapho, uhlobo ngalunye i-serum Akwenziwa yinkampani kuphela ukuthi ifanele uhlobo ngalunye lwesikhumba kodwa futhi ixazulula izinkinga ezithile ezibhekene nazo. Ukuqonda lokhu, isihloko esilandelayo sizobukeza ezingu-5 eziphezulu I-serum ye-Skinceuticals Othenjwa kakhulu namuhla.
1 Ukwethulwa kwe-cosmetic brand Skinceuticals
2 Ingabe I-Skinceuticals Serums Iyasebenza?
3 Indlela yokukhetha i-serum efanele ye-Skinceuticals
3.1 Ngohlobo lwesikhumba
3.2 Ngokusho ukusetshenziswa
4 Amaserum angu-5 athenjwa kakhulu e-Skinceuticals
4.1 1. I-Serum Skinceuticals Hydrating B5 Moisturizing Gel
4.2 2. I-SkinCeuticals CE I-Ferulic Serum yokwenza mhlophe futhi ibe mnyama
4.3 3. I-SkinCeuticals I-Phyto Corrective Gel I-Serum Ipholisa Isikhumba
4.4 4. I-SkinCeuticals Phloretin CF
4.5 5. Ukuvuselelwa kwe-Serum skinceuticals metacell B3 anti-ukuguga
Ukwethulwa kwe-cosmetic brand Skinceuticals
Eqinisweni, i-SkinCeuticals iwumugqa wokunakekela isikhumba owasungulwa ngo-1997 nguSheldon Pinnell, MD noRussell Moon e-United States. Ukwengeza, imikhiqizo isuselwe kwinhlanganisela yama-serum e-antioxidant futhi yathuthukiswa futhi yanikezwa ilungelo lobunikazi ngu-Sheldon R. Pinnell.
Ngo-2005, uhlobo lwe-Skinceuticals lwatholwa yiqembu elikhulu kunazo zonke lezimonyo emhlabeni, i-L’Oreal. Ikakhulukazi, izibophezele ekuholeni imboni yokunakekelwa kwesikhumba ocwaningweni nasekusunguleni izinto ezintsha, kanye nokuhlinzeka ngokunakekelwa kwesikhumba okusezingeni eliphezulu okwesekwa yisayensi.
Ingabe I-Skinceuticals Serums Iyasebenza?
Uthole ukuthi, I-serum ye-SkinCeuticals iwumugqa womkhiqizo odume kakhulu wenkampani ene “giant”. Okufana ne-SkinCeuticals vitamin C ecwebezelayo kanye ne-serum emhlophe, i-SkinCeuticals Hydrating B5 Gel hydration serum, kanye ne-SkinCeuticals Phyto Corrective Gel soothing and reddening serum. Akukona nje ukuqondana ukuthi imikhiqizo ye-serum ye-SkinCeuticals ithandwa kakhulu ngabesifazane.
Okokuqala, umkhiqizo wayo ngamunye uqukethe ifomula ekhethekile enezithako ezisebenzayo zephupho “igolide”. Kubandakanya i-vitamin C, i-vitamin E, i-niacinamide, i-B5,… Ngenxa yalokho, ukungabi nomkhiqizo we-SkinCeuticals ku-wardrobe yokunakekelwa kwesikhumba kuyiphutha lamantombazane.
Ukwengeza, ngesithako ngasinye esisebenzayo esihlukile esiqukethwe ohlwini lwezithako, i-serum ngayinye ye-Skinceuticals isebenza ukwelapha inkinga yesikhumba ehlukile. Ngaphezu kwalokho, ngaphansi kwethonya lezithako ezisebenzayo ezinokugxila okuphezulu, i-Skinceuticals serum izoletha imiphumela ephakeme uma kuqhathaniswa nama-moisturizers avamile. Ngakho-ke, khetha I-serum ye-Skinceuticals kuwumkhuba wobuhle wabesifazane ezikhathini zamuva.
Nakuba ama-serum e-Skinceuticals esekelwe kuwoyela namanzi, ukuthungwa kwawo angenawo uwoyela kuwavumela ukuthi angene ajule esikhumbeni sakho ngaphandle kokukushiya unamafutha noma ungakhululekile.
Indlela yokukhetha i-serum efanele ye-Skinceuticals
Kufanele unamathele endleleni yokukhetha i-serum efanele yesikhumba sakho, nomphumela owufunayo. Ngenxa yalokho, isikhumba sakho sizothuthukisa amaphutha aso futhi sisize isikhumba sakho sikhanye kakhulu.
Esikhumbeni esinamafutha, esinamafutha: Kufanele usebenzise i-serum yesikhumba ehlanganiswe ne-glycolic acid noma uvithamini C, i-retinol ukuze ulawule uwoyela futhi wenze isikhumba sibe bushelelezi. Ngaphezu kwalokho, izinhlanganisela ezikule serum zizokhuthaza ukuvuselelwa kwamangqamuzana futhi zivimbele izimbotshana ezivalekile futhi zinciphise ububomvu nokuvuvukala okuvamile esikhunjeni esinamafutha.
Esikhumba esomile: Eqinisweni, ama-serum anezithako ezimanzisa aphezulu azoba mahle kakhulu ezinhlotsheni zesikhumba esomile, ikakhulukazi ngezinsuku ezomile zasebusika. Ngakho-ke, kufanele ukhethe i-serum yesikhumba equkethe i-hyaluronic acid, sebenzisa amafutha esikhumba ukuze ungeze amavithamini.
Ngesikhumba esibucayi: Amantombazane esikhumba azwelayo akuthola kunzima ukukhetha imikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba. Kufanele ukhethe ama-serum anezinga eliphansi futhi akhethekile esikhumbeni esibucayi. Ikakhulukazi, kufanele ukhethe labo abangenawo amakha kanye nezikhishwe zemvelo.
I-serum ethambisayo, isikhumba esibushelelezi nesikhanyayo: Le serum inomphumela wokwandisa ukubopha kwama-molecule amanzi ngaphansi kwesikhumba ngendlela engcono, ngaleyo ndlela ithambisa futhi ishelele isikhumba sakho.
I-Skin Resurfacing Serum: I-Skin Resurfacing Serum ithuthukisa ikhono lamaseli angaphansi kwesikhumba ukuze akhiqize kabusha. Ngaphezu kwalokho, iphinde ibambezele inqubo yokuguga, inciphisa ukwakheka kwemibimbi futhi isiza ekwandiseni ukukhiqizwa kwe-collagen ngendlela engcono kakhulu.
I-Skin whitening serum, i-anti-acne serum: Uma isikhumba sakho sivela amabala amnyama amaningi, ithoni yesikhumba engalingani noma izinduna, i-melasma ngenxa yezimbangela eziningi eziyingozi. Ngaleso sikhathi, i-serum emhlophe, i-acne serum ekhethekile ibhekwa njenge-panacea equkethe izakhi eziningi zokusiza ukulwa nokuvuvukala, ukunciphisa induna kanye nezinduna ezifihliwe.
I-serum ethambisayo ekhishwe ku-hyaluronic acid (HA) izithako ezisebenzayo ezithambisayo. Ngaphezu kwalokho, ama-serum amhlophe avame ukugxila ezingxenyeni ezisebenzayo ze-biologically, ama-antioxidants, amavithamini, njll.
I-serum elwa nokuguga, ukuvuselelwa kwesikhumba kunemisoco eminingi kunezinye izimonyo. Ngoba zingena zijule ezingqimbeni ezi-3 ze-epidermis. Ngaphandle kwalokho, i-serum elwa nokuguga, ukuvuselelwa kwesikhumba nakho kulekelelwa ngezakhi zokondla isikhumba.
Futhi ama-acne serums ngokuvamile ane-Salicylic acid, AHA, BHA, glycolic acid, citric acid, zinc, izitshalo ezikhishwe esihlahleni setiye, i-thyme, ikhukhamba, itiye elihlaza …
Amaserum angu-5 athenjwa kakhulu e-Skinceuticals
Ukusebenzisa i-serum yokunakekelwa kwesikhumba kuzokusiza ukuxosha ngempumelelo ukuguga, kuyilapho uthuthukisa ukushelela kwesikhumba sakho, ubumhlophe kanye nokupinki. Ngakho imikhiqizo I-serum ye-Skinceuticals Ngezansi kuzoba ukukhetha okungcono kakhulu kwereferensi yawo wonke umuntu.
1. I-Serum Skinceuticals Hydrating B5 Moisturizing Gel
Okokuqala, I-Serum Skinceuticals Hydrating B5 ingenye yemikhiqizo eqinisekisa isikhundla “senkosi yamaserum” ye-SkinCeuticals. Ngaphezu komsebenzi wokuthambisa, i-Hydrating B5 Gel serum iphinde ithathe indawo yomphumela wokuthambisa njengokhilimu oyisimangaliso.
Uma sikhuluma ngezithako, i-Skinceuticals Hydrating B5 serum iqukethe i-Vitamin B5 esebenza ukugcina isikhumba sithambile, sithambile futhi sibushelelezi. Ikakhulukazi, ngesithako esijwayelekile i-hyaluronic Acid. Ngenxa yalesi sithako esisebenzayo, iyakwazi ukubamba izikhathi ezifika ku-1000 isisindo sayo emanzini, igcina isikhumba singenamanzi futhi sinomanzi.
Ukusetshenziswa okuvelele kwale serum ye-Skinceuticals ukugcwalisa umsoco esikhumbeni, ukusishiya sizizwa sibushelelezi futhi sisincane. Ngesikhathi esifanayo, ukuthuthukisa izinzuzo ze-moisturizer yansuku zonke, kusiza isikhumba ukuba sigcine umswakama futhi sikhulise ukuqina. Ikakhulukazi, ungayisebenzisa njengesinyathelo sokugcina sokuthambisa sendlela yakho yokunakekela isikhumba.
Intengo yesithenjwa: 1,500,000 VND/30ml.
2. I-SkinCeuticals CE I-Ferulic Serum yokwenza mhlophe futhi ibe mnyama
Lena i-serum ethembeke kakhulu ye-SkinCeuticals namuhla. Iserum SkinCeuticals CE Ferulic iyiserum elwa nokuguga ye-Vitamin C ethuthukisiwe. Ngaleyo ndlela, kusiza ukuvikela isikhumba, i-anti-oxidant eqinile evela kuma-agent ayingozi avela emvelweni.
Okugqamile yi-CE Ferulic enezakhiwo zokulwa ne-antioxidant ehlanganiswe no-15% wevithamini C emsulwa (L-ascorbic acid), 1% uvithamini E (alpha tocopherol) kanye no-0.5% we-ferulic acid. Ngaphezu kwalokho, i-Vitamin C Serum isiza ekunciphiseni ama-radicals mahhala abangelwa imisebe ye-UVA/UVB, imisebe ye-infrared (IRA) kanye nokungcoliswa kwe-ozone (O3), okungaholela ezimpawini zokusheshisa ukuguga kwesikhumba.
Njengebhonasi eyengeziwe, i-Skinceuticals CE Ferulic serum ithuthukisa izimpawu ezibonakalayo zokuguga kanye ne-photodamage, kanye nokubukeka kwemigqa emihle nemibimbi. Ukusuka lapho, khulisa ukunwebeka ngenkathi ukhanyisa isikhumba.
Intengo yesithenjwa: 3,450,000 VND/ 30ml.
3. I-SkinCeuticals I-Phyto Corrective Gel I-Serum Ipholisa Isikhumba
Okokuqala, ihlaba umxhwele ngombala wayo oluhlaza ogqamile, i-SkinCeuticals Phyto Corrective Gel ingenye yamaserum afanelekile esikhumba esizwelayo nesicasuka kalula. Ngaphezu kwalokho, ngemvelo yayo Yokungafaki Uwoyela, ungaqiniseka ukuyisebenzisela isikhumba sakho esinamafutha futhi esithandwa yizinduna.
Le serum ikhishwa ezithakweni zemvelo eziphephile neziyingozi. Ifakwe i-thyme nekhukhamba, le essence inamandla okuthuthukisa ukuzwela kwesikhumba nokucasuka kanye nokudambisa ngokushesha ububomvu esikhumbeni. Ngaphezu kwalokho, ukukhishwa kwesihlahla sikamalibhele kuqukethe ama-antioxidants, avimbela izimpawu zokuguga.
Ikakhulukazi, I-Serum SkinCeuticals Phyto Corrective Kuyadingeka futhi ku-hyaluronic acid. Ngenxa yalokho, umkhiqizo usiza ukugcwalisa ngokushesha amanzi, okwandisa amandla okukhipha isikhumba ngaphandle kokuvala ama-pores.
Intengo yesithenjwa: 2,200,000 VND/30ml.
4. I-SkinCeuticals Phloretin CF
I-Serum SkinCeuticals Phloretin CF ithathwa njengomfowabo oseduze we-CE Ferulic. Ngaphandle kwalokho, i-serum kavithamini C i-Phloretin CF yakhelwe ngokukhethekile isikhumba esinamafutha nesihlanganisiwe ngabakwa-Skinceuticals.
I-Serum SkinCeuticals Phloretin CF Kuqokonyiswe ngezithako ezingu-2% i-Florentin, u-10% wevithamini C emsulwa ukuze kukhanye isikhumba, kunciphise umbala namabala amnyama. Ngaphezu kwalokho, iqukethe u-0.5% we-Ferulic acid ukusiza ukuthuthukisa ukuvikeleka emiphumeleni yokuguga kwesikhumba.
Ngenxa yezithako ezingenhla, ukusetshenziswa okuvelele kwale serum ukuphindaphinda kabili amandla okuvikela isikhumba ezintweni eziyingozi. Izibonelo ukungcoliswa kwe-ultraviolet, infrared kanye nemvelo. Akukhona lokho kuphela, umkhiqizo ubuye ukhanyise isikhumba, uthuthukise ikhono lokukhiqiza i-collagen ukwenza isikhumba sibe bushelelezi. Ikakhulukazi, nciphisa amabala amnyama, amabala amnyama futhi usize ukuthuthukisa izibazi zezinduna.
Intengo yesithenjwa: 2,850,000 VND/ 30ml.
5. Ukuvuselelwa kwe-Serum skinceuticals metacell B3 anti-ukuguga
Ukuvuselelwa kwe-Serum Skinceuticals Metacell B3 emgqeni wemikhiqizo yesikhumba elwa nokuguga ephethwe yi-Skinceutical. Ngaphezu kwalokho, i-SkinCeuticals Metacell Renewal B3 anti-aging serum inamandla okuhlinzeka ngemisoco, ngakho inciphisa izinga lokuguga kwesikhumba kahle kakhulu.
Okugqamile ingxenye ye-Niacinamide ye-vitamin B3 complex, enekhono lokwelapha izinduna ngempumelelo enkulu. Ngaphezu kwalokho, futhi kunomphumela wokulwa ne-oxidation, okusiza ukwandisa ukuzivikela kwesikhumba kakhulu. Ikakhulukazi, iphinde ikhawulele ukukhishwa kwe-sebum esikhumbeni, inciphisa umbala nama-freckles, i-smooth imibimbi.
Ngaphandle kwalokho, i-Skinceuticals serum iphinde yengeza amafutha e-citrus ukuletha iphunga lemvelo, elithambile. Lesi sithako asigcini nje ngokudala iphunga kodwa futhi sisiza isikhumba ukuba senze umgoqo wokuzivikela onekhono eliphezulu lokulwa nokuvuvukala. Ikakhulukazi, i-Tripeptide ingenye yezakhi ezibaluleke kakhulu ekudaleni inani lale serum elwa nokuguga yokuvuselela isikhumba.
Intengo yesithenjwa: 2,350,000 VND/ 30ml.
Ngenhla kunesihloko sokubuyekeza esi-5 esiphezulu I-serum ye-Skinceuticals Okwethenjwa kakhulu namuhla ongabhekisela kukho. Ngethemba, ulwazi olungenhla luzokusiza ukuthi ukhethe i-serum ekulungele.
Xem Thêm Đăng ký chặn cuộc gọi, tin nhắn Viettel, VinaPhone, Mobifone | Muasalebang
[Review] Top 4 loại Kem nền Lancome nào tốt nhất hiện nay | Muasalebang